သင်၏ Instagram Stories | ချိန်းတွေ့ပုံ Androidsis
သင်၏ Instagram Stories ကို ရက်စွဲလုပ်နည်း- ဖြစ်နိုင်သည့် ရွေးချယ်စရာများအားလုံးကို
Nerea Pereira | 11/05/2022 14:00 | NOTICIAS
လုပ်ဆောင်ချက် ပုံပြင် Instagram မှာ နှစ်အတော်ကြာကြာ ရှိနေခဲ့ပြီး ဒါဟာ အကြောင်းရင်းတစ်ခုပါပဲ။ သူတို့က ဒီလူမှုကွန်ရက်ကို နာမည်ကြီးအောင် လုပ်တယ်။. ဇာတ်လမ်းများသည် 24 နာရီကြာအောင် ရုပ်မြင်သံကြားအကြောင်းအရာများဖြစ်ပြီး ထိုအချိန်ပြီးနောက်၊ ဓာတ်ပုံ သို့မဟုတ် ဗီဒီယိုသည် အသုံးပြုသူ၏ပရိုဖိုင်မှ ပျောက်သွားပါသည်။
ဤသည်မှာ သီးခြားအခိုက်အတန့်နှင့် အထူးအခြေအနေများကို မျှဝေလိုသည့်အခါအတွက် အလွန်အသုံးဝင်သော လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ စတစ်ကာများ၊ တေးဂီတ၊ စာသားနှင့် အခြားအရာများကဲ့သို့သော ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသီးသန့်ပြုလုပ်ရန် ဤအကြောင်းအရာအမျိုးအစားတွင် အချို့သောဒြပ်စင်များကို သင်ထည့်နိုင်သည်။ ဤနေရာတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် မည်သည့် filters နှင့် element များလုပ်ဆောင်နိုင်သည်ကို ရှင်းပြထားပါသည်။ သင်၏ Instagram ဇာတ်လမ်းများကို ရက်ချိန်းယူပုံပြသခြင်းဖြင့် သင့်ဇာတ်လမ်းများကို ပိုမိုပြည့်စုံစေရန် ကူညီပေးပါသည်။
ဤဒြပ်စင်ကိုထည့်ရန်နည်းလမ်းများစွာရှိသည်။. အချိန်ထည့်လိုပါက၊ တရားဝင် Instagram စတစ်ကာကို အသုံးပြုရန် အမြန်ဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ သင့်တွင် အပလီကေးရှင်း၏သက်ရောက်မှုပြခန်းတွင် ပါရှိသည့် စစ်ထုတ်မှုများကို အသုံးပြုရန် ရွေးချယ်ခွင့်လည်း ရှိသည်၊ သို့သော် ၎င်းတို့ကို အသုံးပြုရန်အတွက် ၎င်းတို့ကို activated လုပ်ထားရပါမည်။
၎င်းသည် အတိအကျတူညီသည့်ရက်စွဲအတွက်၊ ဤဒြပ်စင်ပေါ်လာသည့်နေရာတွင် စတစ်ကာနှင့် မတူညီသော စစ်ထုတ်မှုများကို သင်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ အချိန် သို့မဟုတ် ရက်စွဲစတစ်ကာကို အသုံးပြုလိုပါက၊ ၎င်းကို သင့်ဇာတ်လမ်းများတွင် ထည့်ရန် အောက်ပါအဆင့်များကို လိုက်နာပါ-
Instagram တွင် ဓာတ်ပုံရိုက်ပါ သို့မဟုတ် သင့်ပြခန်းမှ တစ်ခုကို ရွေးချယ်ပါ။
ပုံကိုရွေးချယ်ပြီးပါက မျက်နှာအနည်းငယ်ရှိသော စတစ်ကာအိုင်ကွန်ကို နှိပ်ပါ။
အချိန် သို့မဟုတ် ရက်စွဲစတစ်ကာကို ရွေးပါ (တင်ပြီးသည်နှင့် မတူညီသော မော်ဒယ်များကို ကြည့်ရန် ၎င်းကို နှိပ်နိုင်သည်)
1.1 သင့်ကွန်ပြူတာမှ သင်၏ Instagram Stories ကို မည်သို့ချိန်းတွေ့မည်နည်း။
2 နောက်ထပ် စဉ်းစားစရာများ
2.1 ပြခန်းမှ ဓာတ်ပုံဟောင်းများကို အသုံးပြုခြင်း။
2.2 Instagram ၏စာသားနှင့်အတူ
3 Instagram ဇာတ်လမ်းများတွင် နှစ်သစ်ကူးရွေးချယ်မှုကို မည်သို့ထည့်သွင်းရမည်နည်း။
စက်မှ ဇာတ်လမ်းများကို Instagram သို့ အပ်လုဒ်လုပ်ရန် ပိုမိုလွယ်ကူသည်။ မိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်းအတွင်း ညာဘက်သို့ လျှောလိုက်လျှင် သို့မဟုတ် စခရင်၏ထိပ်တွင် တွေ့ရမည့် “+” အိုင်ကွန်ကို နှိပ်ပါက ကင်မရာကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး နှိပ်လိုက်သည်နှင့် Scroll ဆီသို့ လျှောချသွားရမည်ဖြစ်သည်။ "History" option ကို သင်ရှာမတွေ့မချင်း အောက်သို့ဆင်းပါ။
ကင်မရာထဲသို့ ရောက်သွားသည်နှင့် ရက်စွဲနှင့် အချိန် ပေါ်လာသည့် Instagram VCR filter ကို သင်ရှာမတွေ့မချင်း စစ်ထုတ်ခန်းတွင် လျှောသွားရပါမည်။ ယခု ဓာတ်ပုံရိုက်ရန်အတွက် သင်သည် ဗဟိုခလုတ်ကို နှိပ်ရုံသာဖြစ်သည်။ ပြီးသည်နှင့်၊ သင်သည် ၎င်းကိုထုတ်ဝေလိုပါက၊ ဘယ်ဘက်အောက်ဘက်ရှိ "သင်၏ဇာတ်လမ်း" ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။
စစ်ထုတ်သည့်ပြခန်းတွင် ဤဒြပ်စင်များအပြင် သင်ကြိုက်နှစ်သက်မည့် အခြားအင်္ဂါရပ်များပါရှိသော နောက်ထပ် စစ်ထုတ်မှုများကို သင်တွေ့ရပါမည်။ ရက်စွဲနှင့် အချိန်များပါ၀င်သော လူသိများသော စစ်ထုတ်မှုများ ရှိသည်ကို သင်တွေ့မြင်ရလိမ့်မည်၊
@usaurio1 ၏ နေ့နှင့် အချိန်
@usaurio2 ၏ နေ့နှင့် အချိန်
@usaurio3 ၏ နေ့နှင့်အချိန်
@usaurio4 ၏ VHS CAM
သင့်ကွန်ပြူတာမှ သင်၏ Instagram Stories ကို မည်သို့ချိန်းတွေ့မည်နည်း။
ကွန်ပြူတာမှ ဇာတ်လမ်းများကို တိုက်ရိုက်ထုတ်ဝေနိုင်မည် မဟုတ်ပါ။e ကို web ဗားရှင်းက ခွင့်မပြုတဲ့အတွက်၊ အဲဒါကို လုပ်ခွင့်ပေးမယ့် လှည့်ကွက်တချို့ ရှိပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့၊ သင့် PC မှာ Instagram အကောင့်ကိုဖွင့်ပြီး တခြားဘာကိုမှမနှိပ်ဘဲ သင့်ကီးဘုတ်ပေါ်ရှိ 'F12' ကိုနှိပ်ပါ။ ထိုအချိန်တွင် စခရင်၏ ညာဘက်တွင် အကန့်တစ်ခု ပွင့်လာသည်ကို တွေ့ရမည်ဖြစ်ပြီး 'F5' ကို နှိပ်ပါ။
အဲဒီအခြိနျမှာ စာမျက်နှာသည် ပြန်လည်စတင်မည်ဖြစ်ပြီး သင်သည် မိုဘိုင်းဗားရှင်းတွင်ကဲ့သို့ Instagram ကို မြင်တွေ့နိုင်မည်ဖြစ်သည်။l၊ ထို့နောက် သင့်ပရိုဖိုင်သို့ ဇာတ်လမ်းများနှင့် ဓာတ်ပုံများကိုလည်း အပ်လုဒ်လုပ်နိုင်ပါသည်။ 'Your story' ဟူသော စာသားဖြင့် ဘယ်ဘက်အပေါ်ဘက်ရှိ သင့်ပရိုဖိုင်ပုံပေါ်တွင် ကလစ်နှိပ်ပါ၊ ထိုအချိန်တွင် သင့်ကွန်ပြူတာ၏ ဖိုင်ဖိုဒါသည် ဓာတ်ပုံတစ်ပုံကို သင်ရွေးချယ်နိုင်သည့်နေရာတွင် ပွင့်လာမည်ကို သတိပြုပါ (ဓာတ်ပုံများကိုသာ အပ်လုဒ်လုပ်နိုင်သည်မဟုတ်ကြောင်း သတိပြုပါ။ ဗီဒီယိုများ)
ဓာတ်ပုံကို သင်ရွေးချယ်ပြီးသည်နှင့် သင်သည် သင့်မိုဘိုင်းပေါ်တွင် ရှိနေသကဲ့သို့ မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ အရာအားလုံးကို သင်မြင်ရပါမည်။ နောက်တစ်ခုကတော့ စတစ်ကာတွေ၊ စာသားတွေ၊ ဒါမှမဟုတ် သီချင်းတွေထည့်ဖို့ အချိန်ရောက်ပါပြီ။ သို့သော် ၎င်းသည် Instagram ၏တရားဝင်ဗားရှင်းမဟုတ်သောကြောင့်၊ ၎င်းတွင် ကန့်သတ်ရွေးချယ်စရာအချို့ရှိပြီး ဤနည်းဖြင့်အသုံးပြုနိုင်မည်မဟုတ်ပေ။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ရက်စွဲနှင့်ပတ်သက်၍ သင်သည် ဓာတ်ပုံကို အပ်လုဒ်တင်သည့်နေ့၏ စတစ်ကာကိုသာ အသုံးပြုနိုင်သည်။
ဒါကို ပြီးမြောက်ဖို့ သင့်မှာ ရွေးချယ်ခွင့်ရှိပါတယ်။Instagram စာသားကို အသုံးပြု၍ သင်အလိုရှိသော ရက်စွဲကို ထားပါ။ ဒါမှ ကြိုက်သလိုရေးလို့ရတယ်။ ၎င်းမှာ ဓာတ်ပုံရိုက်သည့်နေ့နှင့်အချိန် သို့မဟုတ် ဇာတ်လမ်းကို သင်တင်သည့်အချိန်ဖြစ်စေရန် အပလီကေးရှင်းတွင်ရှိသော အချိန်နှင့်ရက်စွဲစတစ်ကာများကို အစီအစဉ်ချထားသည်။
ပြခန်းမှ ဓာတ်ပုံဟောင်းများကို အသုံးပြုခြင်း။
အပေါ်ကမြင်ရမယ့် “+” အိုင်ကွန်ကို နှိပ်ရင် ဇာတ်လမ်းစခရင်ကို ဖွင့်နိုင်ပါတယ်။ ထို့နောက် 'History' option သို့ ရွှေ့ပါ။ ယခု သင်ထုတ်ဝေမည့်နေ့မှမဟုတ်သော သင့်ပြခန်းမှပုံတစ်ပုံကို ရွေးပါ၊ ၎င်းကိုရွေးချယ်သောအခါ ရက်စွဲသည် စခရင်ပေါ်တွင် အလိုအလျောက်ပေါ်လာမည်ဖြစ်သည်။ အားလုံးအဆင်သင့်ဖြစ်ပြီဆိုရင် ဘယ်ဘက်ထောင့်မှာမြင်ရမယ့် 'Your story' option ကိုနှိပ်ပြီး သင့်ပရိုဖိုင်မှာ ထုတ်ဝေပါလိမ့်မယ်။
တရားဝင်အက်ပ်တွင် ဖောင့်အမျိုးမျိုးအပြင် ၎င်းတို့အားလုံးအတွက် ဒီဇိုင်းများပါရှိသောကြောင့် သင်လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ စာသားများကို မီးမောင်းထိုးပြပါ။ ဤနည်းအားဖြင့် သင်သည် Instagram စာသားကို အသုံးပြုသည့် ရက်စွဲနှင့် အချိန်ကို ထည့်ပါက၊ သင်သည် Instagram စတစ်ကာများ သို့မဟုတ် စစ်ထုတ်မှုများကို အသုံးပြုထားသကဲ့သို့ပင် ကောင်းမွန်နေမည်ဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့်၊ သင်သည် ဓာတ်ပုံကို ရွေးချယ်ပြီးသည်နှင့်၊ သင်သည် ညာဘက်အပေါ်ထောင့်တွင် မြင်ရမည့် စာသားရွေးချယ်မှုကို နှိပ်ရမည်ဖြစ်သည်။ အဲဒီမှာ၊ သင်လိုချင်တဲ့ ရက်စွဲ ဒါမှမဟုတ် အချိန်ကိုရေးပြီး ရှိနေတဲ့ (အနည်းငယ်မဟုတ်တဲ့) တွေထဲမှာ သင်အနှစ်သက်ဆုံး စာလုံးဖောင့်ကို ရွေးပြီး သင်လိုချင်တဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေနဲ့ စာသားကို ဒီဇိုင်းထုတ်နိုင်ပါတယ်။
Instagram ဇာတ်လမ်းများတွင် နှစ်သစ်ကူးရွေးချယ်မှုကို မည်သို့ထည့်သွင်းရမည်နည်း။
ပဌမ Instagram အတွင်းမှ ဓာတ်ပုံတစ်ပုံ သို့မဟုတ် ပြခန်းမှ တစ်ခုကို ရွေးချယ်ခြင်းဖြင့် ဓာတ်ပုံရိုက်ပါ။ သင် အပ်လုဒ်တင်လိုသောအရာကို သင်ရွေးချယ်ပြီးသောအခါ၊ သင်သည် စတစ်ကာများ ကဏ္ဍသို့ သွားရမည် ဖြစ်ပြီး ထိုနေရာအားလုံးတွင် ရှိသော နှစ်သစ်ကို ရွေးချယ်ပြီး ၎င်းကို ရွေးချယ်ရမည်ဖြစ်သည်။
သင့်ဇာတ်လမ်းကို ထည့်ရန် ၎င်းကို နှိပ်သောအခါ၊ အောက်တွင် အခြားအသုံးပြုသူများသည် ထိုတူညီသောစတစ်ကာကို ၎င်းတို့၏ဇာတ်လမ်းများတွင် ထည့်သွင်းနိုင်ကြောင်း အသိပေးချက်တစ်ခုကို သင်တွေ့ရပါမည်။ အပြင်သတိပေးချက်များကိုဖွင့်ပါ။ သင်၏နောက်လိုက်များနှင့်တွေ့ဆုံရန် သို့မဟုတ် လူသစ်များနှင့်တွေ့ဆုံရန် အလွန်ရိုးရှင်းပြီး ထိရောက်သောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
ပြီးသွားသောအခါ၊ 'ပြီးပြီ' ရွေးစရာကို နှိပ်ပြီး အမှားလုပ်မိပါက ၎င်းကို တည်းဖြတ်ရန် စတစ်ကာတစ်ခုတည်းကို နှိပ်ရပါမည်။ သင်ပြီးသောအခါတွင် အကြောင်းအရာကို သင့်ပရိုဖိုင်သို့ ထုတ်ဝေရန် 'သင့်ဇာတ်လမ်း' ရွေးချယ်မှုကို နှိပ်ပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » သင်၏ Instagram Stories ကို ရက်စွဲလုပ်နည်း- ဖြစ်နိုင်သည့် ရွေးချယ်စရာများအားလုံးကို
SEPE ချိန်းဆိုမှုကို အွန်လိုင်းမှ တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့် ပယ်ဖျက်နည်း
သင့် Android မိုဘိုင်းအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော အပလီကေးရှင်းများ